Tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina Budapest ny Korean Air
Home » Fandefasana gazety » Tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina Budapest ny Korean Air
Mitohy ny fitomboan'ny firoboroboan'ny seranam-piaramanidina Budapest rehefa nanambara zotram-piaramanidina vaovao iray hafa ny renivohitra Hongroà amin'ny fahavaratra 2020. Ny Korean Air, ilay mpitondra saina any Korea atsimo, dia hiasa intelo isan-kerinandro avy ao amin'ny foiben'i Seoul Incheon mankany Budapest manomboka ny 23 Mey hatramin'ny 17 Oktobra. Ny fahatongavany dia midika fa ny vavahady voalohany any Eoropa Afovoany sy Atsinanana dia hanolotra serivisy fahavaratra isan'andro any Seoul, manome safidy sy fahafaha-manao bebe kokoa noho ny hatramin'izay.
Ny tolotra vaovao Koreana Air dia mihoatra ny manaporofo ny filàna be amin'ity tsena mitombo ity sy hatrany Azia avaratra atsinanana amin'ny ankapobeny. Ny fahaizan'i Budapest fahavaratra taona 2020 tany avaratra atsinanana dia nitombo mihoatra ny 100% raha oharina amin'ny fahavaratra 2019. Ny renivohitr'i Hongria ankehitriny dia mirehareha am-pireharehana amin'ireo lalana lavitra be mankany Beijing, Chongqing, Sanya, Seoul, ary Shanghai any avaratra atsinanan'i Azia, miaraka amin'i Chicago, Doha , Dubai, New York, Philadelphia, ary Toronto.
Manome hevitra momba Koreana AirFanambarana, Kam Jandu, CCO, Seranam-piaramanidina Budapest, hoy izy: “Mahafinaritra ny mahita fa mbola misy sidina lavitra hafa indray natombok'i Budapest ka hatrany Seoul tamin'ny Mey. Ny fangatahana tsena mankany sy avy any Korea dia ampy hanohanana ireo sidina telo vaovao isan-kerinandro ireo ary ny ekipan'ny BUD dia manolo-tena tanteraka hanohana ny Korean Air amin'izay azo antoka fa ho làlana vaovao hafa mahomby. "
Moody's slashes Boeing ratings taliwala ny 737 MAX fatiantoka
Curio Collection nataon'i Hilton voalohany tao St. Kitts